သင်၏ ကုန်ပစ္စည်းအား အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
သင်ရှာဖွေကြည့်ရှုလိုသည့် အရာအတွက် Click နှိပ်ရုံမျှသာ!
ကုန်ပစ္စည်းအား ရွေးချယ်ပါ
ကုန်ပစ္စည်အား ရှာဖွေရန် သင့်အတွက် နည်းလမ်း ၄ သွယ် ရှိပါသည်။
1. ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း : ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းမှ တစ်ဆင့် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အမျိုးစုံလင်လှစွာသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ရန် အမျိုးအစားတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ
2. ရှာဖွေမှု လုပ်ငန်းစဉ် : သင့်စိတ်ထဲမှ လိုချင်သောပစ္စည်းရှိပါက ရှာဖွေလိုသည်ကို စာမျက်နှာ၏ ထိပ်ဆုံးတွင် ရှိသော နေရာတွင် စာရိုက်ထည့်၍ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ သက်ဆိုင်သော ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
3. အထူး အစီအစဉ်များ : အထူးအစီအစဉ်များကို သင် စိတ်ဝင်စားပါသလား? ကုန်ပစ္စည်းများပေါ်သို့ Click နှိပ်ပါ။
4. အထူးထင်ရှားသော ကုန်ပစ္စည်းများ : ကျွန်ုပ်တို့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ပြသထားသော အကောင်းဆုံး ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ကမ်းလှမ်းချက်များကိုလည်း သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သင့်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများ တွေ့ပါက ကုန်ပစ္စည်းပေါ်သို့ Click နှိပ်ပြီး ဖော်ပြချက်အပြည့်အစုံကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
ဈေးဝယ်တွန်းလှည်းအတွင်းသို့ ထည့်မည်
ရွေးချယ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းအတွက် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
ကုန်ပစ္စည်းအား သင် ၀ယ်ယူလိုပါက “ယခု ၀ယ်ယူရန်” အား Click နှိပ်၍ သင်၏ ဈေးဝယ်တွန်းလှည်းအတွင်းသို့ ထည့်မည်
ယခု သင့်ထံတွင် ဈေးဝယ်တွန်းလှည်းရှိနေပြီး သင်အော်ဒါမှာယူလိုသော ကုန်ပစ္စည်းများအား ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် အခွင့်အရေးရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
a. “ဆက်လက်ဈေးဝယ်ခြင်း” ပေါ်တွင် Click နှိပ်၍ ဆက်လက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
b. “ငွေပေးချေခြင်းလုပ်ဆောင်ရန်” ပေါ်တွင် Clickနှိပ်၍ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအော်ဒါအား ငွေပေးချေရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
c. “ ဖယ်ရှားရန်” ပေါ်တွင် Clickနှိပ်၍ သင်၏ဈေးဝယ်လှည်းအတွင်းမှ အချို့သောပစ္စည်းများအား ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။